အင်တာနက် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အင်တာနက် ဖြန့်ဝေပေးမယ့် ဖေ့စ်ဘုခ်ရဲ. ဒရုန်းလေယာဉ် | Buzzy
အင်တာနက် မရှိတဲ့နေရာတွေမှာ အင်တာနက် ဖြန့်ဝေပေးမယ့် ဖေ့စ်ဘုခ်ရဲ. ဒရုန်းလေယာဉ်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြီး ၊ wifi လွှင့်ပေးမှာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ တစ်နေ့တစ်ခြား များပြားလာတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း အင်တာနက် လုံးဝမရရှိပဲ နေထိုင်နေရသူပေါင်းဟာလည်း လူပေါင်း ၄ ဘီလီယံလောက် ရှိနေပါတယ် ။ ဖေ့စ်ဘုခ်က ဒီလိုလူတွေအတွက် နည်းပညာမြင့် လေယာဉ်နဲ့ အင်တာနက်ဖြန့်ဝေပေးဖို့ လုပ်ဆောင်နေမှုပါ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အငျတာနကျသုံးစှဲသူ တဈနတေ့ဈခွား မြားပွားလာတယျ ဆိုပမေယျ့လညျး အငျတာနကျ လုံးဝမရရှိပဲ နထေိုငျနရေသူပေါငျးဟာလညျး လူပေါငျး ၄ ဘီလီယံလောကျ ရှိနပေါတယျ ။ ဖစျေ့ဘုချက ဒီလိုလူတှအေတှကျ နညျးပညာမွငျ့ လယောဉျနဲ့ အငျတာနကျဖွနျ့ဝပေေးဖို့ လုပျဆောငျနမှေုပါ။
လေယာဉ်ကတော့ အကွီလာလို့ အမည်ပေးထားပြီး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် သုံး လေယာဉ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က အမေရိကန် စစ်အခြေစိုက်စခန်း YPG မှာ စမ်းသပ်ပျံသန်းခဲ့ပြီး ရလဒ်လည်း ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လယောဉျကတော့ အကှီလာလို့ အမညျပေးထားပွီး နရေောငျခွညျစှမျးအငျ သုံး လယောဉျမြိုး ဖွဈပွီး ၊ ဇှနျလ ၂၈ ရကျနကေ့ အမရေိကနျ စဈအခွစေိုကျစခနျး YPG မှာ စမျးသပျပြံသနျးခဲ့ပွီး ရလဒျလညျး ကောငျးမှနျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
လေယာဉ်ဟာ ပထမအကြိမ် စမ်းသပ်ပျံသန်းရာမှာ လေထဲ ၉၆ မိနစ် ပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ ခန့်မှန်းထားတာထက် သုံးဆပိုကြာခဲ့တာပါ ။ ပျံသန်းနေစဉ်မှာ လေယာဉ်ရဲ. အမြင့်နဲ့ အရှိန်ပေါ်မူတည်ပြီး နေရောင်ခြည်က ရရှိတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ဝပ် ၂၀၀၀ မှ ဝပ် ၅၀၀၀ ကြား အသုံးပြုရမှာပါ ။ အမြင့်ကနေမှ မြေပြင်ကို အင်တာနက် ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာပါ။
လယောဉျဟာ ပထမအကွိမျ စမျးသပျပြံသနျးရာမှာ လထေဲ ၉၆ မိနဈ ပြံသနျးနိုငျခဲ့ပွီး ဒါဟာ ခနျ့မှနျးထားတာထကျ သုံးဆပိုကွာခဲ့တာပါ ။ ပြံသနျးနစေဉျမှာ လယောဉျရဲ. အမွငျ့နဲ့ အရှိနျပျေါမူတညျပွီး နရေောငျခွညျက ရရှိတဲ့ လြှပျစဈစှမျးအငျ ဝပျ ၂၀၀၀ မှ ဝပျ ၅၀၀၀ ကွား အသုံးပွုရမှာပါ ။ အမွငျ့ကနမှေ မွပွေငျကို အငျတာနကျ ဖွနျ့ဝပေေးသှားမှာပါ။
လေယာဉ်စမ်းသပ် ပျံသန်းမှုကို ဇူကာဘတ်က သူ့ရဲ. ဖေ့စ်ဘုခ်ပေါ်မှာလည်း တင်ထားပေးပါတယ်။
လယောဉျစမျးသပျ ပြံသနျးမှုကို ဇူကာဘတျက သူ့ရဲ. ဖစျေ့ဘုချပျေါမှာလညျး တငျထားပေးပါတယျ။